Shan qof oo ku dhimatay gaari lagu dhuftay dad Yuhuud ah gudaha magaalada Qudus - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldShan qof oo ku dhimatay gaari lagu dhuftay dad Yuhuud ah gudaha magaalada Qudus
January 8, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Shan qof oo ku dhimatay gaari lagu dhuftay dad Yuhuud ah gudaha magaalada Qudus. [Sawirka: Twitter]
Qudus-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof oo ay kamidyihiin afar Yuhuud ah iyo qofka weerarka lagu eedeeyay oo Falastiini ah ayaa la dilay kadib markii gaari lagu dhuftay dad marayay wado kutaala magaalada Qudus maanta oo Axad ah, sida ay sheegeen saraakiisha.
Afhayeen u hadlay Yuhuuda oo la dhaho Luba Samri ayaa sheegay in afar askari oo Yuhuuda ay ku geeriyoodeen weerarkaas.
Dhan kale, bayaan kasoo baxay wasaarada caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa lagu sheegay in la toogtay qof Falastiini ah.
Ugu yaraan 15 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacantay weerarka oo loo adeegsaday gaari weyn, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Yuhuuda.
November 29, 2016 Ninkii geystay weerarka jaamacada gobolka Ohio ee Mareykanka oo la aqoonsaday in uu Soomaali ahaa
October 14, 2016 Ku dhawaad 10 askari oo Masaari ah oo lagu dilay gobolka Siinaay ee dalka Masar
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dhismaha dekad kumeel gaar ah ayaa la dhammeeyay si loo badbaadiyo badeecada saaran doonida caariday, sida uu sheegay guddoomiyaha kooxda badbaadada, Shiikh Fuaad Aflow. Wiishka ayaa saakay oo Jimce ah bilaabay soo dajinta [...]